प्रकाश राई - हामी नाङ्गो भोको भएर हाम्रो अधिकार र अस्तित्वको निम्ती लड्न तयार छौ - MONGOL KHABAR
प्रकाश राई - हामी नाङ्गो भोको भएर हाम्रो अधिकार र अस्तित्वको निम्ती लड्न तयार छौ
फाल्गुन । सोलुखुम्बु, आज गोरु काटेर खादा नेपाल सरकारको पुलिसले जेल हालिरहेको छ, कसरी धर्म निरपेक्ष भयो ? जति गर्दा नि केहि नलागेसी कपडा खोलेर देशकै नागरिक अधिकार माग्न सडकमा उत्रिदा समाएर जेल हालिन्छ । यो देशको ८०% अहिन्दु मुलबासी मंगोलहरुलाई आदिबासी जनजाती बनाइन्छ । यो देशका मुलबासी मंगोल चेलिहरु बलात्कार हुदा सरकार र पुलिस प्रशासन सबै चुप बस्छ । तर यो देशका शरणार्थी खस आर्यहरुको चेली बलात्कार हुदा राज्य र प्रशासनले अनुसन्धान आयोग रातारात खडा गरेर सडक र सदन आफै बन्द गरि अपराधी र हत्यारालाई फाँसिको माग राख्छ ।
हत्यारा पृथ्वीनारायण शाह जस्तो अपराधी ब्यक्ति सहिद हुन्छ । देश र माटाेको लागी लड्ने प्रथम सहिद क्याप्टेन लखन थापा मगर, गंगालाल जस्ता बीर सहिदहरु चाही सहिद नहुने ? सहिद दिवस नमान्ने ? अब भन्नुस कसरी लोकतन्त्र लागु भयो ? कसरी संविधान सबै जनताको लागी भयो ? कसरी कानुन सबै जनताको लागी भयो ? हामी यसको उत्तर खोजिरहेका छौ सरकार ?
खस आर्यहरुको अर्थात आफ्नो नक्सल चेलिहरुको तिज मनाउदा राज्याले बजेट र होटेल दिने ? यो देशको भुमिपुत्र मुलबासीहरुको तिहार-डुम्जी -लोसार-साकेलामा बजेट र होटेलको त के कुरा विद्यार्थीहरुलाइ सार्बजनिक बिदा समेत नदिने ? यो के खालको संबिधान हो ? सरकार तिमि राज्य सत्ता चलाउ हामी मान्दछौ तर यो देशको ८०% अहिन्दु मुलबासी मंगोलहरुको अधिकार माथी खेलवाड गर्नु भनेको तिम्रो दुर्दशा हो ।
तिमिहरु यो देशको भुमिपुत्रहरुको अधिन भित्र बस्नु पर्दछ । तिमिलाई हामिले मौका दिएका हौ तर तिम्रो ब्याहोरा देखाइहाल्यौ । अब हामी सिंह झै गर्जिन थालिसकेका छौ । तिम्रो प्रत्येक प्रहरी प्रशासन भित्र हाम्रा दाजुभाइ छिरिसकेका छन । अब त्याहीबाट बिद्रोह सुरु हुनेछ । हामी त्याही बिद्रोहको पर्खाइमा छौ । बन्दाबस्ता गरिरहेका छौ । बिचार गर यो देशका ८०% अहिन्दु मुलबासी मंगोलहरु तिम्रो सिंहदरबार भित्र पस्यौ भने अब के हुन्छ याद गर,,हामी मित्र सम्झेर अधिकार मागिरहेका छौ । हाम्रो अस्तित्वलाइ नमेट आग्रह गरिरहेका छौ ।
संविधानमा आदिबासी जनजाती हैन मुलबासी मंगोल लेख भनेर आग्रह गरिरहेका छौ । हामिले मुखले तिमिलाइ भनिरहेका छौ अझै घमण्ड गरेर बस्यौ भने तिमिलाइ याद होला तिम्रो हत्यारा पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रो बाउ बाजे र हाम्रो पुर्खाहरुलाइ कसरी मारेका थिए हामी बाध्य भएर सडकमा उत्रिन नलगाउ सरकार । हामी नाङ्गो भोको भएर हाम्रो अधिकार र अस्तित्वको निम्ती लड्न तयार छौ । डा.गोपाल गुरुङले २०२६ साल देखी तिमिलाइ आग्रह गर्दै गर्दा पनि अझै घमण्ड गरेर बसिरहेका छौ । त्यसकारण अब हामी मागेर हैन खोसेर अगाडी बढन बाध्या हुनेछौ ।
यो देशको ८०% अहिन्दु मुलबासी मंगोलहरुले अब सोच्नै पर्ने दिन आएको छ । यदि संविधानमा आदिबासी जनजातिको ठाँउमा मुलबासी मंगोल लेखिएन भने म तातो गोलि थाप्न अगाडी उभिनेछु । मुलबासी मंगोल अस्तित्व र अधिकारको लागि जय मंगोल !
लेखक / प्रकाश राई
जिल्ला सभा सोलुखुम्बु